Madaxweyne Gaas oo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare. – Radio Daljir
Agoosto 16, 2016 3:48 b 0
Garoowe, Aug 16 2016–Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Qareen Yuusuf Xaaji Nuur u magacaabay gudoomiyaha maxkamada sare guddig maxkamada sare ee Puntland, sida lagu shaaciyay degreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha.
Yuusuf Xaaji Nuur ayaa horey usoo noqday gudoomiyihii maxkamada sare ee Puntland xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, wuxuuna intaas wixii ka dmabeeyay ahaa gudoomiyaha xafiiska gargaarka sharciga ee Puntland.
Dhanka kalena aqalka madaxtooyada waxaa kulan kuleh golaha xukuumadda Puntland oo lafilayo inay meelmariyaan gudiga maxkamadda sare ee dowladda Puntland ee uu madaxweynuhu magacaabay.
Puntland oo hay’ada qaramada midoobey kala hadashay arrimo muhiim ah.